Ama-Drones - I-Hardware yamahhala | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala (Ikhasi 2)
I-EHang isikhombisa ukuthi itekisi-drone yayo ezimele ikwazi ukwenzani
Ukungena lapho sizokhuluma khona mayelana nenqubekela phambili inkampani i-EHang ebinayo iminyaka emibili kwi-drone yayo yokuzimela enamandla wokuthwala abagibeli ngaphakathi.
I-BioCarbon iqinisekisa ukuthi ama-drones ayo angakwazi ukutshala kuze kufike ezihlahleni eziyi-100.000 ngehora
I-BioCarbon ikwazile ukuqhubeka nokuguqula ama-drones embewu yayo ukuze ikwazi manje ukutshala izihlahla ezifika ku-100.000 ngehora elilodwa nje.
I-Amazon isivele icabanga ngokwakhiwa kwama-drones akwazi ukushaja amabhethri ezimoto zikagesi
I-Amazon ikwazile ukuthola ilungelo lobunikazi elibonisa uhlelo oluthile lokukhokhisa ibhethri lemoto yakho kagesi usebenzisa i-drone.
IJunta de Andalucía izosebenzisa ama-drones ukuvikela izilwane zasekhaya
Enye yezinkinga ezinkulu ezilwelwa e-Andalusia ukuthi ukwazi ukuvikela nokuthola ...
I-Russia isivele inesistimu yayo yokulwa ne-anti-drone
I-Russia ikhombisa isifuba sayo nepulatifomu yayo ephelele ekwazi ukuxosha noma yiluphi uhlobo lokuhlaselwa okwenziwa yizinkumbi zama-drones, okufanayo lapho basebenza khona e-United States nokuthi abakakakhuli
UXiaomi wethula ibhethri lemoto elingashaja ngisho ne-drone yakho
UXiaomi wethula iMi Car Inverter entsha, ibhethri langaphandle elingu-20.000 60 mAh elingaba ngelakho ngaphansi kwama-euro angama-XNUMX futhi linamandla okukhokhisa kusuka kuselula yakho, ithebhulethi yakho ngokusebenzisa izinto ezahlukahlukene njenge-drone yakho noma i-laptop yakho.
I-drone ibe ngukhiye wokutakula abantu ababili abasengozini enkulu
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngokuthi idrone ibiyingxenye ebalulekile kanjani ekusindisweni kwabantu abasha ababili abebebhajwe emsinga onamandla ebhishi e-Australia.
I-Russia ine-drones yenuzi emikhunjini yayo engaphansi kolwandle
Ngokombiko we-Defassified ovela eMnyangweni Wezokuvikela wase-United States, kuyaqinisekiswa ukuthi iRussia inephrojekthi ye-Stage-6 eqhubekayo, eyenze idrone yasemanzini enamandla okusebenza endaweni engamakhilomitha ayi-10.000 10 ngokulayisha inyukliya engamamitha ayishumi inhloko.
I-DJI Mavic Air, yazi umlandeli weMavic Pro onentshisekelo kangcono
Akudingeki ukuthi silinde isikhathi eside ukuthi inkampani enobukhulu nobubanzi obufana ne-DJI ukwethula ozolandela esikhundleni seMavic Pro, idrone entsha enamandla amakhulu nokusebenza manje okwaziwa ngokuthi yi-DJI Mavic Air.
IBoeing ikhombisa idrone yayo entsha kagesi ekwazi ukuthwala kufika kuma-200 kilograms
IBoeing isanda kumangaza abantu bendawo nabantu abangabazi emhlabeni we-drone ngenxa yokwethulwa kwemoto entsha kagesi engagunyaziwe ekwazi ukuthwala noma yiluphi uhlobo lokuthengiswayo isisindo sayo esingeqi kuma-200 kilogram.
IJapane idala i-drone patrol ukunqanda 'ubhadane' lokuzibulala kuleli
Kusuka eJapan kunqunywe ukuthi kubhejwe ukusetshenziswa kwama-drones ukuqapha izindawo ezikude futhi ngaleyo ndlela kuvimbele abantu ukuthi bazibulale kulezi zinhlobo zezindawo.
Izisekelo zaseRussia eSyria zihlaselwa yizinkumbi zamadrones
Izizinda ezimbili zaseRussia eSyria ezinsukwini ezimbalwa ezedlule zahlaselwa ngamadroni alawulwa kude, okuwukuhlasela, okuthe ngemuva kophenyo lokuqala, ungqongqoshe wezokuvikela waseRussia waveza ukuthi kwenziwa ngamasosha ngokubambisana ne-United States.
Tello, idrone elithakazelisayo ngentengo yokuncintisana kakhulu
I-Ryze Tech iyasimangaza ngokwethulwa kweTello, idrone encane efakwe ubuchwepheshe obuhle kakhulu obuvela kwi-Intel ne-DJI okwenza ukuthi ithakazelise ikakhulukazi futhi ngaphezu kwakho konke kuphephile ukusetshenziswa ngabancane endlini yethu.
I-DGT izosebenzisa ama-drones kusuka ngo-2019
Njengoba kusanda kwenziwa obala, ngokusobala ku-General Directorate of Traffic, i-DGT, banethemba lokuthi ngonyaka ka-2019 bazobe sebekulungiselele ama-drones abo amasha azokwazi ngawo ukulawula kahle yonke imigwaqo yemigwaqo ehlukene.
Ngemuva kwe-fiasco ekuthengisweni kweKarma, ekugcineni inkampani yakwaGoPro, ekwakhiweni kabusha kwangaphakathi okugcwele, ithathe isinqumo sokudiliza abantu abaphakathi kwama-200 nama-300 esigabeni sayo semikhiqizo yasemoyeni.
I-China isivele ine-drone yokuqapha nokuhlasela okuphambili kakhulu emhlabeni
Umbutho waseChina ubukisa ngeWingLoong II, okuyisona siphambili sobuchwepheshe kanye nokuhlaselwa kwe-drone.
Imithetho emisha yokundiza kwama-drones isivele iyasebenza
NgoMgqibelo odlule imithethonqubo emisha elawula ukusetshenziswa kwama-drones iqale ukusebenza ngokuphepha, iwavumela ukuthi akwazi ukundiza phezu kwamadolobha, izixuku zabantu ngisho nasebusuku.
Ividiyo: Isebenza kanjena le drone yamasosha akwa-Israyeli
Ezinyangeni ezimbalwa sazi ukuthi ibutho lakwa-Israyeli linohlelo olusebenzayo ngalo ...
Izindiza zizokwazi ukufaka uphethiloli phakathi nendiza sibonga le drone ezimele yeBoeing
Izindiza, ngokwesisekelo ezempi, zizokwazi ukufaka uphethiloli phakathi nendiza ngenxa yedrone ezimele eyakhiwa iBoeing.
Kwenzekani lapho idrone ishayisana nendiza? E-China banayo impendulo
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngezivivinyo ezenziwe eChina ukukhombisa ukuthi kwenzekani lapho idrone ishayisana nendiza.
Amalayisense okundiza ama-drones eSpain ayanda
Kusuka ku-AESA kumenyezelwa ukuthi, kuze kube manje, eSpain sekuvele kunabasebenza ngaphezu kwe-drone abangaphezu kwe-2.700 abanelayisense enikezwe abaphathi.
Thola umsebenzi njengomshayeli wendiza ye-drone kule webhusayithi
Ngenxa yale webhusayithi entsha ungathola womabili umsebenzi njengomshayeli wendiza ye-drone kanye nomshayeli wendiza orekhoda noma owenza umsebenzi owudingayo
I-China ihlola ngempumelelo i-drone yezentengiselwano enkulu kunazo zonke emhlabeni
Kusuka eChina sekuqinisekisiwe ukuthi benze ngempumelelo izivivinyo kulokho okubhekwa njenge-drone enkulu yezentengiselwano emhlabeni.
Izwe laseMelika livimbela ama-drone opharetha ukuba bandize phezu kwezikhungo zenuzi zakuleli
Izwe laseMelika lisanda kwethula umthetho omusha lapho kungavunyelwe neze ukundiza phezu kwezikhungo zenuzi zakuleli.
Lokhu kungumphumela wokusebenzisa ama-drones angaphezu kwe-1000 ukukhanyisa idolobha
Kulo nyaka isithangami seFortune Global sithathe isinqumo sokukhetha idolobha laseChina iGuangzhou elizosingatha…
Maduze kuzoba semthethweni ukundiza ama-drones ebusuku nasezakhiweni eziseduze
Ngenxa yesimemezelo saseRoyal, ukugunyazwa kwangaphambili kwe-AESA, noma yisiphi isilawuli sizokwazi ukundiza idrone yaso ebusuku noma eduze kwamabhilidi nezixuku.
E-Australia bazosebenzisa ama-drones ukuthola ukuthi kukhona oshaka yini ezingxenyeni zabo
Ngokwezitatimende zakamuva ezivela e-Australia, izwe lizoqala ukusebenzisa ama-drones ukuthola ubukhona boshaka ngaphambi kwesikhathi.
ISouth Korea ilungiselela ibutho lama-drones ahlomile
Umbutho waseNingizimu Korea uhlose ukufaka uphiko olusha olwakhiwa ama-drones ahlomile ukubhekana nomakhelwane bawo baseNyakatho Korea.
Izitimela eSpain zizobhekwa ngama-drones
Iqembu lezinkampani ezizimele nezikahulumeni eliholwa yiSigmaRail lizoqala ukuqapha ujantshi kusetshenziswa ama-drones.
I-Amazon izobhubhisa ama-drones ayo uma kutholakala noma yiluphi uhlobo lokuwohloka
I-Amazon ithola ilungelo lobunikazi elisha lapho ama-drones ayo ezohlukaniswa ngokuhlelekile uma kwenzeka ethola ukwehluleka endizeni.
I-China isikhombisa i-laser cannon yayo ekwazi ukudubula phansi ama-drones
Ziningi izinkampani, eziningi zazo ezixhaswe ngemali kahulumeni, ezisebenza namhlanje kwezentuthuko ...
ISKYF yethula i-drone yayo entsha ekwazi ukuthwala kufika kuma-650 kilograms
ISKYF, inkampani yaseRussia ekhethekile ekwenziweni kwama-drones, yethula i-drone yayo entsha ngomthamo wokuthwala afinyelela kuma-650 kilograms.
UDII Goggles RE, izingilazi zomhlaba wokuncintisana
I-DJI Goggles RE yigama okusanda kwethulwa ngalo izibuko ezintsha zomncintiswano ezakhiwe ngumenzi wezindiza waseChina.
I-Apple ikhiphe uhlobo lwayo olukhethekile lwe-DJI Mavic Pro
I-Apple isebenzise isivumelwano sayo ne-DJI ukuqala ukuthengisa ezitolo zayo, zombili ezibonakalayo nezingokomzimba, imodeli ekhethekile yeMavic Pro.
I-DJI isongela umsebenzisi obike ukwephulwa kwezokuphepha kumaseva abo
Ngemuva kokuvula uhlelo nganoma yimuphi umsebenzisi ozoklonyeliswa ngokubika isiphazamisi, lokho umqambi wohlelo akuthole ku-DJI kuyizinsongo.
IDedrone ne-Axis Communications bethula ubuchwepheshe obusha obukwazi ukuthola ama-drones
IDedrone ne-Axis Communications bajoyina amabutho ukuze bakhe inkundla ezokwazi ukuthola nokuhlonza ama-drones endaweni ethile.
668-R8WHm, idrone eshibhile kakhulu enekhamera ye-HD ne-WiFi
Ukungena lapho sizokhuluma khona nge-668-R8WHm, idrone encane enekhamera ye-HD ne-WiFi engaba ngeyakho ngaphansi kwama-euro angama-50.
Bakha umfanekiso we-robot R4-P17 kusuka ku-Star Wars
U-Alejandro Clavijo udale umfanekiso ofana no-R4-P17 oqinisekiswe nguLucasfilm, inkampani ephethe iStar Wars Saga ...
I-NASA izosebenzisa ama-drones ngobuhlakani bokufakelwa ukuqapha isimo solwandle lwethu
I-NASA yethula iphrojekthi entsha ezozama ngayo ukuthola izinguquko ezenzeka olwandle ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu.
I-Alibaba idiliva amaphakheji ayo okuqala ngama-drones
I-Alibaba ingenye yezinkampani ezinkulu zokuthengisa umkhiqizo ezizama ukuqala ukukhipha izinhlelo zazo nge ...
IJapan yethula uhlelo olusha lokuletha ukudla nge-drone eFukushima
URakuten noLawson, izinkampani ezimbili ezinkulu eJapan, basanda kuqala uhlelo lokuletha ukudla namaphakeji emadolobheni athintwe yiFukushima.
Iphromoshini isivele isebenza kungxenyekazi entsha yokuphathwa kwe-drone traffic
UMnyango Wezokuthuthukiswa kweSpain usanda kumemezela isilinganiso okuzokwakhiwa ngaso inkundla yokulawulwa kwezimoto ze-drone.
Ngenxa yalolu hlelo lwe-DJI iziphathimandla zizokwazi ukuqapha ithrafikhi ye-drone
I-AeroScope yigama i-DJI elibhabhadise ngalo ithuluzi layo elisha elivumela ukuqapha nokuhlonza ama-drones endiza endaweni ethile.
IPortugal izokwakha izindawo ezikhethekile zokuhlola nokuthuthukisa ama-drones amasha
Njengoba kumenyezelwe ngokusemthethweni, ePortugal bafuna ukukwazi ukunika amandla izindawo ezintsha lapho bonke abakhiqizi bangahlola ngokukhululekile ama-drones.
ISpain izoba nomthethonqubo wokusetshenziswa kwama-drones ekupheleni konyaka
Ngokwezitatimende ezenziwa nguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa kweSpain njengamanje, izwe lethu lizoba nomthethonqubo omusha wokusetshenziswa kwamadroni asebenzayo ekupheleni konyaka.
Izinkampani zaseMelika zandisa izinhlelo zazo ze-drone ngenxa ye-oda likaDonald Trump lakamuva
Ngenxa yokuphathwa kukaDonald Trump, izinkampani zaseMelika zizokwazi ukuqinisa ukuthuthukiswa kwezinhlelo zazo zokulethwa kwamaphakeji nge-drones
Lesi sikhali esisha esivela e-United States siyakwazi ukudubula noma iyiphi i-drone eza ngaphakathi
URaytheon, usonkontileka we-United States Army, usanda kwethula isikhali sayo esisha se-laser esikwazi ukudubula noma yiluphi uhlobo lwe-drone emakethe.
Indiza yomgibeli ishayisa i-drone eQuebec
Idolobha laseCanada iQuebec libone ingozi ebesikade sikhuluma ngayo isikhathi eside futhi esifanekisela ...
Amaphoyisa aseDubai abukisa nge-hoverbike yabo entsha abazogada ngayo ezitaladini
Ngesikhathi kugujwa iviki leGitex Tehcnology, amaphoyisa aseDubai akhombise eyokuqala ye-hoverbike yabo entsha abazogada ngayo emigwaqweni.
U-Aena uzosebenzisa ama-drones ezikhumulweni zezindiza zawo eziyisikhombisa ukwenza ukuhlolwa kwezokuphepha
Ngemuva kokubheja izinkampani ezilingana neBoeing ezikwenzayo ukufeza imisebenzi ngokuningi ...
ICityAirbus, izindiza ze-Airbus manje sezikulungele ukuthatha amadolobha ethu
Izindiza zamatekisi zakwa-Airbus, ezibizwa ngeCityAribus, zizoqala ukusebenza emadolobheni amakhulu emhlabeni maphakathi no-2018.
IVolocopter ihlola itekisi yayo yedrone esibhakabhakeni saseDubai
Ngemuva kokulinda isikhathi eside, iVolocopter ekugcineni ikwazile ukuvivinya ngempumelelo ama-drones ayo amatekisi esibhakabhakeni saseDubai.
IPassenger Drone, umqondo omusha wemoto ezindizayo ozongena emakethe kungekudala
IPassenger Drone ingumqondo omusha wemoto endizayo lapho ungagibela khona futhi uhambe nomaphi lapho ufuna khona ngenxa yama-motors ayo kagesi.
Isigaba Sokuqala Sezimboni sisikhombisa ikhamera yaso entsha eyi-megapixel engu-190
Ngaphandle kokungabaza, kukhona ibhizinisi elikhulu ngemuva kokusetshenziswa kwama-drones ochwepheshe. Ubufakazi balokhu engikushoyo ...
Ama-Drones njengochwepheshe bomshuwalense wemoto yakho neyekhaya lakho
Izinkampani zomshuwalense seziqala ukubukeka kahle lapho zibeka ochwepheshe bazo ochungechungeni lwama-drones enza umsebenzi ofanayo.
I-Yuneec H520, idrone entsha eqondiswe ekusetshenzisweni kobuchwepheshe
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngokwethulwa kweYuneec H520 entsha, idrone okwakheke ngayo nokusebenza kwayo kuhloselwe imakethe yezobuchwepheshe.
Lokhu kubukeka kanjani njenge-drone yokuqala yamphibious emhlabeni
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngokwethulwa kweColyaer Freedom S100, idrone yokuqala yasemanzini emhlabeni, imodeli eyenziwe i-UVS Intelligence System.
Ngenxa yalawa ma-retina amasha okufakelwa, ama-drones azokwazi ukuhamba ebumnyameni ngokushesha okukhulu nangaphezu kwayo yonke indlela ephephile.
I-Seadrone isivele isilungele imodeli yayo yokuqala yasolwandle
ISeadrone, inkampani edalwe yi-Indra, isanda kukhombisa umphakathi okokuqala ukusebenza kwe-drone yayo entsha yasolwandle yomsebenzi wokutakula.
I-United States yakha isikhali se-laser esikwazi ukudubula phansi ama-drones ngemizuzwana
Ngemuva kwezinyanga eziningi zokuthuthuka nokuhlolwa, i-United States Army ibonakala inesikhali sayo esisha se-laser esikwazi ukudubula ama-drones ngemizuzwana.
Indoda eyathenga ama-drones eDaesh iboshwe eMérida
Kulokhu, kwakunguNgqongqoshe Wezangaphakathi uqobo oqinisekise ukuboshwa eMérida kowesilisa owayezinikele ekuthengeni iDaesh ama-drones.
ISwitzerland izonika amandla inethiwekhi yokulethwa nama-drones ngo-Okthoba olandelayo
Ziningi izinkampani zobukhulu nokujula kweGoogle noma iAmazon ezisebenza ngokungakhathali ekuthuthukiseni ...
ISkyfront yenza enye yama-drones ayo akwazi ukugcina amahora ama-4 nemizuzu engama-34 indiza
ISkyfront isisinikeza ividiyo lapho isibonisa khona ukuthi enye ye-drones yayo ikwazi kanjani ukuzimela ngokuzimela kwezindiza amahora amane nemizuzu engama-4.
NgoSepthemba 25, inkambo yokushayela indiza ye-Aerotec ne-UCAV iqala
ICatholic University yase-Avila, kanye ne-Aerotec, bazokwethula izifundo zabo ezintsha zokushayela izindiza ngoSepthemba 25.
Le drone iyakwazi ukuthola oshaka ngokusebenza okuhle kakhulu
I-Little Ripper Group ezinze e-Australia isanda kwethula idrone ekwaziyo ukuthola oshaka ngokunemba okungu-90%.
I-Red Cross iqala uhlelo olusha olufuna ukuqapha izinhlekelele zemvelo ngama-drones
IRed Cross isanda kumemezela ukuthi sebezoqala uhlelo lapho bezofuna ukuxhasa ongoti ezinhlekeleleni zemvelo ngama-drones.
I-UN icwaninga ukuthi ingakhiwa kanjani i-database enamarekhodi awo wonke ama-drones akhiqizwayo
Komunye wemihlangano yokugcina ye-UN kuphakanyiswe ukuthi kwenziwe i-database ekwazi ukuqukethe amarekhodi awo wonke ama-drones akhiqizwayo.
I-DJI izovumela ama-drones ayo ukuthi andize ngaphandle kokufinyelela kwi-inthanethi
I-DJI isanda kumemezela ukuthi onjiniyela bayo basebenza ngemodi yokulawula ama-drones abo ngaphandle kwesidingo sokuxhumeka kwe-inthanethi.
I-UNICEF izosebenzisa ama-drones ukuletha imithi e-Oceania
I-UNICEF isanda kumemezela izinhlelo zayo zokwakha iphrojekthi yokuletha imithi eziqhingini ezahlukahlukene zase-Oceania isebenzisa ama-drones.
I-3DR ne-DJI bazokwenza ukuthi imikhiqizo yabo ihambisane
Ekugcineni, ngemuva kwezinyanga zokuxoxisana, i-3DR ne-DJI basanda kumemezela ukuthi bazoqala ukusebenzisana ukwenza imikhiqizo yabo ihambisane.
I-Facebook izosebenzisa ukusetshenziswa kwama-drones neziphuphutheki ukuletha i-intanethi emhlabeni wonke
IFacebook imemezela ukuthi izoqala ukusebenzisa ama-drones neziphuphutheki ukwenza iphrojekthi yayo yethulwe lapho izoletha i-intanethi emhlabeni wonke.
ISuez Water Spain idala isizukulwane esisha sama-drones wokubhekwa kwendle
ISuez Water Spain isanda kumemezela iphrojekthi entsha lapho izofuna khona ukuklama nokwenza ama-drones akwazi ukuqapha izinhlelo zendle.
IFrance izothuthukisa impi yayo ngamadroni amasha ahlomile
IFrance ekugcineni isiqinisekisile nje ukuthi uMnyango wayo Wezokuvikela uzothenga uchungechunge lwama-drones ahlomile azohlomisa ngawo ibutho lawo.
ILilium ikwazile ukuqoqa ama-dollar ayizigidi ezingama-90 ukwenza amatekisi ayo endiza abe ngokoqobo
ILilium iyinkampani ngemuva komqondo omuhle ofuna ukuguqula amatekisi emadolobheni ethu abe ama-drones azimele ngokuphelele.
I-DeltaQuad, idrone ekwazi ukuzimela ngamakhilomitha ayi-150 wokuzimela
IDeltaQuad iyindalo yakamuva yenkampani yaseDashi iVerical Technologies, idrone ekwazi ukwephula wonke amarekhodi okuzimela emhlabeni.
Lezi yizinto ezintsha ezikhona ku-DJI Mavic Pro nakuPhantom 4 Pro
Ekugcineni akudingeki silinde isikhathi eside ukuthi inkampani yaseChina i-DJI imemezele zonke izindaba ezikhona kuMavic Pro nakuPhantom 4 Pro.
I-DGT izosebenzisa izindiza nama-drones ukuhlawulisa abashayeli
Esitatimendeni sakamuva esikhishwe yi-DGT, kumenyezelwe ukuthi i-ejensi izoqala ukusebenzisa ama-drones nezindiza ezincane ukukhokhisa abashayeli.
Abanye abashushumbisi bezidakamizwa baqala ukusebenzisa ama-drones amakhulu ukudlulisa izidakamizwa emngceleni
Abashushumbisi bezidakamizwa abakhulu kunabo bonke emhlabeni sebeqalile ukusebenzisa ama-drones amakhulu ukudlulisa izidakamizwa emingceleni yamazwe ahlukene.
Lesi yisibhamu uKalashnikov asenzele ukudubula phansi ama-drones
I-Russian Kalashnikov Consortium isanda kushicilela imininingwane ngokuqalwa kwesibhamu esisha esikwazi ukudubula phansi ama-drones.
Buyekeza i-DJI drone yakho ngaphambi kukaSepthemba noma izosebenziseka kalula
I-DJI isanda kukhipha isibuyekezo esibucayi sawo wonke ama-drones ayo, okumele avuselelwe ngaphambi kukaSepthemba noma kungenziwa kungabi nalutho.
I-US yakha imicibisholo 'engabizi kakhulu' yokudubula phansi ama-drones
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngokuthi yimiphi imicibisholo 'yezomnotho' emisha eyenziwe yi-United States ukudubula phansi ama-drones nokuthi asebenza kanjani.
I-Amazon ivikela ilungelo lobunikazi elisha elihlobene nensizakalo yayo yamaphasela we-drone
I-Amazon isanda kufaka isicelo selungelo lobunikazi elisha elihlobene nohlelo lwayo lokulethwa kwamaphasela we-drone oluzimele ngokuphelele.
I-DJI inika ama-drones ayo imodi 'engaxhunyiwe ku-inthanethi' efuna ukwazi
I-DJI isanda kumemezela ukwethulwa kwemodi entsha 'engaxhunyiwe ku-inthanethi' lapho ama-drones ayo engathumeli izithombe, amavidiyo noma izingodo zezindiza kumaseva enkampani
Ama-drones ezempi azoba nomsebenzi wokuqapha amahlathi ethungatha abashisa ngomlilo
Ngokokuqala ngqa eSpain, uMbutho ufinyelela esivumelwaneni noMphakathi Ozibusayo ukuqapha amahlathi kusetshenziswa ama-drones awo ezempi.
IBioCarbon Engineering isivele inama-drones ayo akwazi ukuphinda agcwalise amahlathi
Inkampani i-BioCarbon Engineering inohlelo lwayo olusha abazolwela ngalo ukuphinda bazalise amahlathi ngokuzimela besebenzisa ama-drones.
Ibutho lase-Uruguay livula umncintiswano wokuthengwa kwama-drones alo amasha
Njengoba kusanda kushicilelwa ngokusemthethweni, kubonakala sengathi Amasosha ase-Uruguay ekugcineni azovula umncintiswano ozophela ngokuthengwa kwama-drones angama-20.
Babopha umlingisi we-jihadist owayefuna ukudubula phansi umlwi waseMelika nge-drone
Isishoshovu se-Islamic State esazama ukudubula phansi isosha laseMelika lisebenzisa i-drone elawulwa kude eboshwe.
Amasosha ase-US anokukhanya okuluhlaza ukudubula phansi ama-drones
I-United States inikeza ukukhanya okuluhlaza kumalungu e-Army yayo ukuze bakwazi ukudubula phansi noma yiluphi uhlobo lwe-drone uma bekubheka njengosongo.
I-Amazon ikhombisa imininingwane eminingi mayelana nezinkundla zayo zeselula zama-drones
Ukungena lapho sizokhuluma khona nge-patent yakamuva abayishicilele bevela e-Amazon lapho singabona khona ukuthi amapulatifomu eselula ama-drones abo angaba njani.
Amasosha aseMelika athi ama-DJI drones 'asengozini'
Umbutho Wezempi wase-United States usanda kukhipha isitatimende ememezela ama-DJI drones njengamamodeli 'asengozini', ngakho-ke bazoyeka ukuwasebenzisa.
IVolocopter ithola utshalomali olusha lwama-euro ayizigidi ezingama-25
Namuhla inkampani yakwaVolocopter isezindabeni futhi ngenxa yokuthi, futhi, isanda kuthola utshalomali lwenhlokodolobha usozigidi, izigidi ezingama-25 kulokhu.
Ama-Drones angaba ukhiye ekwakhiweni kokutshalwa ngokunembile kweminqumo
Ngaphandle kokungabaza, esinye sezitshalo i-Andalusia ebheja kakhulu kuso ngumkhakha ...
I-Snapchat isivele isesigabeni sokugcina sokuklama ama-drones ayo
Ngemuva kwesikhathi eside sokulinda, kubonakala sengathi inkampani yaseSnapchat ekugcineni inamadrononi ayo amasha aselungile.
I-China iveza ama-kamikaze drones ayo ahlukile
IButho Labantu BaseChina Elikhululayo libonisa izindiza zalo ezintsha ze-kamikaze ezifakwe ibhomu elincane kodwa elinamandla okokuqala ngqa.
Indiza yasolwandle yaseSpain engagunyaziwe izosetshenziselwa ohambweni lokutakula e-United States
Indiza yasolwandle ezizimele ngokuphelele, eyenziwe yinkampani yaseSpain i-Singular Aircraft, izosetshenziselwa e-United States ukuthunyelwa kwezinsizakalo.
I-Connect Robotics ikhombisa amandla ama-drones ayo
I-Connect Robotics yinkampani yasePutukezi eyasungulwa ngo-2015 ngu-Eduardo Mendes noRaphael Stanzani abakwazile ukungena ...
Ibutho laseSpain lihlola uhlelo olusha olukwazi ukudubula phansi ama-drones endizeni
Njengamanye amazwe amaningi, iSpanish Army ihlupheka kakhulu ukuvikela isisekelo sayo eMosul ngokumelene ne ...
Abakwa-Endesa bazobuyekeza amakhilomitha angaphezu kuka-4.000 olayini e-Andalusia ngezindiza ezinophephela emhlane nangamadroni
Abakwa-Endesa basanda kumemezela ukuthi okokuqala e-Andalusia drones kuzosetshenziselwa ukwenza ukubuyekezwa kwemigqa yamandla aphakathi nendawo aphezulu.
I-Amazon isivele icabanga ukuthi ingahlola kanjani amakhasimende ayo ngokusebenzisa ama-drones ayo okulethwa
I-Amazon isanda kufaka isicelo se-patent entsha lapho i-drones yayo, lapho iletha iphakethe, izokwazi ukuqoqa imininingwane yamakhasimende.
Le phrojekthi yeqiniso engathandwa kwabathelisi esikubona ifuna ukusiza abasebenza nge-drone
EPolytechnic University yaseMadrid, kulindeleke ukuthi, ngokusebenzisa iqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona, abasebenza nge-drone bangasizwa emsebenzini wabo.
UMurcia uzoqapha amahlathi akhe ngosizo lwama-drones
IMurcia ingelinye lamadolobha okuthi, ngemuva kokwethula izinhlelo ezithile ezihlobene nobuchwepheshe obusha, kubukeka sengathi ...
ITactical Missiles Corporation isivele isebenza ukuthuthukisa ama-drones aphezulu
ITactical Missiles Corporation isivele iveze ukuthi izimpahla eziningi zenkampani yayo sezivele zisebenza ekwakhiweni kwama-drones aphezulu.
Le yi-aeromoto eyethulwe yiScorpion-3
IScorpion-3 isanda kusebenzisa ithuba lokugujwa kombukiso wamazwe omhlaba we-Aerospace MAKS 2017 ukwethula i-hoverbike yayo entsha.
I-US Navy isebenza nge-laser ukudubula phansi ama-drones
I-United States Navy isiqale umsebenzi wokwakha isikhali se-100 kW laser esikwazi ukudubula ama-drones, izindiza, kanye nemicibisholo.
INASA ithi maduzane uzoqala ukuzonda umsindo wama-drones
Ngokusobala nangokusho komsebenzi wakamuva oshicilelwe yi-NASA, umsindo okhiqizwa noma iyiphi i-drone uyacasula kakhulu kunanoma iyiphi enye imoto.
Ama-Drones afakwe ama-lasers ukuqapha amagesi angcolisayo
Iphrojekthi eyenziwe iqembu labacwaningi abavela e-Institute of Standards and Technology ngokubambisana ne ...
IParaZero SafeAir, iparashute yama-drones ezentengiselwano
Uma uke wagibela i-drone noma ubusondele eduze kothile obekungokokuqala kubo ...
I-JAXA ithumela i-drone ku-International Space Station
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngazo zonke izici zedrone entsha uJAXA ayithumele kwi-International Space Station.
I-DLR RacerX, idrone esheshayo emhlabeni
Ngemuva kokufinyelela ijubane eliphezulu lamakhilomitha angama-288 ngehora, i-DLR RacerX ibalwe njengedrone eshesha kakhulu emhlabeni.
I-DJI ibhekene nomphakathi ozinikele ekugenceni ama-drones ayo
I-DJI ingenye yalezi zinkampani ezithathe ngokungathi sína ngokungavumeli noma ngubani ukuthi ...
I-MIT yenza kube nokwenzeka ukudala ama-drones alingane nezinambuzane
Ngenxa yephrojekthi enkulu yokugcina eshicilelwe ngochungechunge lonjiniyela nabaphenyi abavela eMIT, namuhla singakhuluma nge ...
Kungani ungakhokhisi imoto yakho kagesi nge-drone?
UDarko Darmar Markovic, umklami waseSerbia, wethula indlela ethokozisayo yokukhokhisa izimoto zikagesi kunoma iyiphi indawo yokupaka.
Le yindlela isilawuli sethrafikhi yomoya esisebenza ngayo lapho idrone inyonyobela umgwaqo ovulekile wezindiza
Ukungena lapho ngifuna ukukukhombisa ividiyo lapho ungabona khona ukuthi kwenzekani lapho idrone encane ihlasela indawo evikelekile yesikhumulo sezindiza.
U-Israel uthola amadroni ahlome ngezibhamu ezingaphansi komhlaba zokulwa emadolobheni
IDuke Robotics yinkampani yaseMelika ebhekele ukuthuthukiswa nokwakhiwa kwama-drones ahlomile azofika maduze kwa-Israyeli
INational Geographic ishicilela izithombe ezinhle kakhulu ezithathwe ngama-drones ngo-2017
Njengoba minyaka yonke iNational Geographic isanda kushicilela izithombe eziyi-12 zokugcina zohlelo lwango-2017 lwezithombe ezihamba phambili ...
IDubai izokwethula uhlelo lwayo lwamatekisi e-drone kulo Julayi
IDubai izoba idolobha lokuqala emhlabeni ukuba nensizakalo yamatekisi ama-drone ekwazi ukuthatha abahambi ngaphakathi.
ESpain kuzoba nzima kakhulu ukubona ama-drones eletha amaphakheji ekhaya
Ngenxa yezinkinga ubuchwepheshe obusha njenge-drones ezingadala, kungahle kungenzeki ukuthi bahambise amaphakheji.
I-Russia izoba ngumbuso wokuqala ekukhiqizeni ama-drones ezempi
Ngokwesitatimende sakamuva esenziwe yiPhini likaNdunankulu waseRussia, uDmitri Rogozin, kubonakala sengathi abaholi bezwe hhayi nje kuphela ...
Amaphoyisa azokwazi ukubona noma iyiphi i-drone endizeni
Ngenxa yalolu hlelo olusha olwenziwa e-United States, iphoyisa lizokwazi ukubona noma iyiphi i-drone phakathi nendiza.
I-UNICEF neMalawi bazokwethula uhlelo olusha lwe-drone
Ngenxa yokusebenzisana kwe-UNICEF, iMalawi izoba ngeyokuqala kuyo yonke i-Afrika ukuba nomhubhe we-drone osebenza kahle.
AbakwaFacebook bamemezela ukwenziwa ngcono kwe-drone ezothatha i-inthanethi iyiswe ezindaweni ezikude
IFacebook isanda kumemezela kwinethiwekhi yayo inqubekela phambili ebalulekile esanda kuyihlola ngempumelelo kuphrojekthi yayo ye-Intanethi yomhlaba wonke.
I-Drones yokulwa nokugawulwa kwamahlathi ethu
USusan Graham ungunjiniyela osungule uhlelo oluzimele lwama-drones ukuze akwazi ukutshala izihlahla ngokuzimela ngokuphelele.
I-MIT isikhombisa amadroni ayo amasha nahlukile enamasondo
I-MIT iqala uhlobo olusha lwama-drones akwazi ukuzungeza phansi noma ukundiza kuye ngezimo ezisizungezile.
I-China isibonisa ukuthi i-laser yokuqala ekwazi ukudubula phansi ama-drones maphakathi nendiza ibukeka kanjani
Iqembu labacwaningi abavela eChina Academy of Engineering Physics lisanda kwakha i-laser enamandla anele okudubula phansi ama-drones.
Izwe laseMelika selivele lisebenza kwi-drone ekwazi ukubhubhisa imicibisholo
Ukungena lapho sizokhuluma khona nge-drone entsha eyenziwa e-United States, iyunithi enamandla okudubula imicibisholo yamazwekazi.
I-European Union ifuna ukuba nomthetho wama-drones usulungile kungakapheli iminyaka emibili
I-European Union isanda kumemezela ukuthi bazokwaba izinsiza eziningi ukuze kube nomthetho omusha wama-drones ngaphambi kuka-2019.
Ukuba nedrone uletha iphakethe ekhaya lakho sekuvele kungenzeka eChina
I-JD.com yinkampani yaseChina namuhla eseqalile ukuletha amaphakheji kumakhasimende ayo isebenzisa ama-drones anobukhulu obuhlukile.
UDrone Hopper uwina i-'2017 Aeronautical Innovation Award 'ngenxa yephrojekthi yakhe yakamuva
UDrone Hopper uklonyeliswe ngomklomelo we-2017 Aeronautical Innovation Award ngomsebenzi wakhe wokuthuthukisa idrone ekwazi ukusiza ukucisha imililo.
IVolocopter ithola ukukhanya okuluhlaza ukuze kuhlolwe eDubai
IVolocopter, iphrojekthi ezimele yamatekisi, ekugcineni ithole ilambu eliluhlaza ukuqala ukuhlolwa kwezinkundla edolobheni laseDubai.
I-Airbus ihlola ngempumelelo indiza enophephela emhlane ezizimele
I-Airbus isivele isimangaze ngokukhishwa okusha kwabezindaba lapho isitshela khona ukuthi isivele ihlolisise ngempumelelo indiza yayo enophephela emhlane ezizimele.
Ithimba lama-drones lizophatha ukuthola ukuchitheka kukawoyela olwandle oluphakeme
Ithimba labacwaningi abavela eNyuvesi yaseCagagena bebelokhu besebenza ohlelweni oluzimele lwe-drone ukuthola ukuchitheka kukawoyela.
Ama-Drones ukuvimbela imililo yehlathi
Iqembu labacwaningi lisebenza ekwakheni indlela yokuvikela umlilo ehlathini kusetshenziswa ama-drones.
Isithandwa se-Drone? Lawa ama-akhawunti we-Instagram okufanele uwalandele
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngamaphrofayili amaningi we-Instagram athakazelisa kakhulu wokufunda amasu we-drone photography.
I-Airbus isivele isebenza ochungechungeni olusha lwama-drones okwazi ukwethula imikhumbi
I-Airbus isanda kwethula iphrojekthi entsha eSingapore lapho imikhumbi ingalayishwa khona futhi ithululwe ngqo ngama-drones.
USpapchat uthenga inkampani yedrone
Njengamanje sonke sizokwazi iSpapchat, inkampani ezuze okuthile okwakubonakala kungenakwenzeka kuleli phuzu ...
EHungary bafundisa ama-drones ukuzingela njengezimpisi
Ososayensi baseHungary benze i-algorithm ekwazi ukulingisa cishe ngokuphelele indlela yokuziphatha kwepakethe lezimpisi.
I-Swift Playgrounds manje ikuvumela ukuthi uhlele amarobhothi, ama-drones, kanye nezinsimbi zomculo
I-Swift Playgrounds uhlelo lokusebenza lwamahhala olutholakala ku-Google Play Isitolo lapho ungahlela khona amarobhothi, ama-drones nezinsimbi zomculo ngokwakho.
IDrones ingawenza lula umsebenzi we-061
Kusuka esifundazweni saseJaén, sithola imininingwane yokuthi izinhlaka eziphuthumayo ezinjenge-061 ziqala kanjani ukusebenzisa ama-drones.
UDrones ujoyina impi yokulwa nomiyane wengwe
Ochwepheshe baqala ukusebenzisa ama-drones namalulwane ukulawula nokuqeda inhlupho yomiyane wengwe ocekela phansi indawo yaseMedithera yaseSpain.
UDrones uzoba ngabaculi abasha be-graffiti esikhathini esizayo esingekude kakhulu
Kancane kancane, ukusetshenziswa okusha kwama-drones kuyavela, ngombono omusha ngamunye kuvela okusha emakethe ...
I-DJI Spark, idrone encane, eshibhile futhi enekhono
Inkampani ye-DJI isivele isimangaze ngokwethulwa kwe-DJI Spark entsha, idrone encane futhi ethokozisayo ongayithanda nakanjani.
I-Amazon iqala ukucabanga ngezinsongo ezingaba khona ezivela kuma-drones ayo ezentengiso
Yize ungekho umthetho wokuyilawula, i-Amazon iyaqhubeka nokusebenza ekwakhiweni kwama-drones ayo okulethwa kwamaphasela.
I-DJI ikhuluma ngeplatifomu yayo entsha yokuqukethwe kwe-multimedia
U-DJI usanda kumemezela ukwakhiwa kwesikhulumi esisha samavidiyo lapho noma yimuphi umsebenzisi angalayisha amavidiyo akhe futhi awakhombise umhlaba.
UMnyango Wezangaphakathi ngeke usebenzise ama-drones ukuqapha imingcele yawo
UMnyango Wezangaphakathi ekugcineni unquma ukungasebenzisi i-drones ukusiza ekubhekeni ukuwela umngcele weCeuta neMelilla.
I-Airbus Aerial, isigaba esisha esikhethekile emisebenzini yezentengiso ene-drones
I-Airbus Aerial iyisigaba esisha esidalwe yi-Airbus enkulu ye-aerospace ukuze sikwazi ukuqoqa nokuhlaziya izithombe nedatha ngama-drones.
Impi elandelayo yezohwebo izolwa esibhakabhakeni sethu
Izinkampani ezinkulu zamazwe omhlaba zifuna ukuthuthukisa imikhiqizo yazo ukulungiselela impi enkulu elandelayo yezentengiselwano.
Ngale ndlela umhlaba ubheka ngemuva kwekhamera yama-drones amaningana
Ukungena lapho ngifuna ukukukhombisa khona amavidiyo ahlukile aqoshwe ngama-drones lapho ungajabulela khona, ngokubuka kwenyoni, izindawo ezinhle kakhulu emhlabeni.
Abakwa-Edgybees bazothuthukisa amakhono akho okushayela izindiza nge-'mdlalo 'olula
U-Edgybees uyinkampani ngemuva kwesoftware engokoqobo elula futhi ekhangayo ongajabula ngayo ne-DJI drone yakho.
I-DJI ikhipha isibuyekezo sokuvimbela ama-Drones ayo ekundizeni eSyria nase-Iraq
Ngaphandle kokumemezela ukukhishwa kwesibuyekezo esisha, i-DJI isivele isoftware ikhawulele wonke ama-drones ayo ukuze angakwazi ukundiza e-Iraq noma eSyria.
I-NTT Docomo isibonisa isipho sayo esiyindilinga sokumaketha nokukhangisa
I-NTT Docomo isivele isimangaze ngombono othakazelisa kakhulu owenza ama-drones angabahlanganyeli abaphelele bezinkampani zokumaketha.
ULarry Page unesithakazelo emotweni endizayo yesikhathi esizayo
Enye yezinkampani ezinikele ekwakhiweni kwezimoto ezindizayo zabantu lapho uLarry Page atshale khona imali, isibonisa uhlobo lwayo oluhlaba umxhwele.
I-DJI Goggles, umqondo omusha wokubonisa wama-drones ozotholakala emakethe kusuka ngoMeyi 20 ngama-euro angama-549.
Yakha i-drone eyenziwe ekhaya ngebhodi le-Arduino nephrinta ye-3D
UNikodem Bartnik osemusha ukwazile ukwakha idrone eyenziwe ngokwabo no-Arduino, igajethi esingazakhela yona ngenxa yencwadi yakhe yewebhu ...
I-Air Robotics iyinkampani yokuqala yangasese emhlabeni ukuthi inikezwe ilayisensi yokundiza amadroni azimele
I-Air Robotics iyinkampani yokuqala ukuthola imvume kubaphathi yokusebenzisa kabi iphrojekthi yayo yedrone ezimele.
I-DJI Phantom 4 Advanced, ithuthukisa ikhamera yakho ngenkathi inciphisa intengo yayo
UDJI usimangazile ngokwethulwa kwePhantom 4 Advanced, idrone entsha ezotholakala emakethe ngo-Ephreli 30.
I-UEFA iqaphile ngokuhlaselwa okungenzeka kwe-drone kowamanqamu weChampions League
E-UEFA besaba ukuthi ukuhlasela kwamaphekula ngama-drones kungenzeka ngesikhathi sokugubha umdlalo wamanqamu weChampions League.
ISpain ingaqala ukusebenzisa ama-drones ukuvikela imingcele yezwe
Ngenxa yephrojekthi yeSurveiron, imingcele yaseSpain izokwazi ukuthembela kuma-drones ukwenza imisebenzi yokuqapha nokuvikela
UJingdong usanda kumemezela ukwakhiwa kwezikhumulo zezindiza ezingama-150 zama-drones
UJingdong, inkampani enkulu yezentengiselwano yaseChina, usanda kumemezela ukuthi kungakapheli iminyaka emithathu bazokwakha izikhumulo zezindiza ezingama-150 zama-drones.
ICanon isivele isebenza ekuthuthukiseni idrone yayo
Ngemuva kokukhipha amakhamera ayo akamuva anamandla, iCanon ekugcineni inqume ukugxila futhi isebenze kwi-drone yobuchwepheshe engenakulinganiswa.
ESwitzerland baqala ukusebenzisa ama-drones ukudlulisa amasampula elebhu
Ziningi izikhathi lapho ama-drones, alungiswe kahle ngochwepheshe, akwazi ukunikeza izinsizakalo ku ...
I-Yuneec imemezela ukudilizwa okusha
I-Yuneec yinkampani yakamuva ehlobene nomkhakha we-drone okuthi, ngemuva kokunwetshwa okukhulu kwamazwe omhlaba, umemezele ukudilizwa emsebenzini njengengxenye yabasebenzi bayo.
Le yindlela i-SEAT ekholwa ngayo ukuthi ama-drones esikhathi esizayo azoba njalo
I-SEAT, inkampani eyaziwa emhlabeni wonke ngenxa yokwenziwa kwayo nokwakhiwa kwezimoto, ikhombisa ukuthi bakholelwa kanjani ukuthi ama-drones angafinyelela ezimbonini zawo.
Amaphoyisa ase-United States angasebenzisa ama-drones ahlomile
I-United States isivele inamadolobha amaningana lapho kucatshangelwa khona ukuthi amasosha ayo angasebenzisa ama-drones ahlomile.
IDelsat International Group ifakiwe esikhumulweni sezindiza sezimboni iTeruel
IDelsat International Group imemezela ukuvulwa kwehhovisi elisha esikhumulweni sezindiza iTeruel ngokuhlukaniswa kwalo ngamadrone.
I-Amazon Primer Air, isinyathelo esisodwa esisondela ekubeni ngokoqobo
Ngemuva kwezicelo eziningi nokulinda, i-Amazon ekugcineni ikwazile kule mpelasonto ukuhlola insiza yayo yePrime Air emhlabathini wase-US.
Ngenxa yale phrojekthi, ama-drones amaningana azokwazi ukusebenzisana
Ngenxa yephrojekthi eyenziwe ngabacwaningi abaningana e-University of Zurich, ama-drones amaningana manje angasebenza ndawonye.
Lolu uhlelo lokuvikela ukubhekana nama-ISIS drones e-Iraq
UMnyango Wezokuvikela waseSpain ufuna indlela yokuthola nokuhambisa isihlangu se-elekthronikhi eBesmayah base.
IHuawei isebenza ohlelweni olukwazi ukushaja ama-drones endizeni
IHuawei isikhombisa ipulatifomu ephelele yokukhokhisa amabhethri ama-drones ethu ngaphandle kokuthi ayeke ama-motors awo.
I-Russia isivele inesikhali esikwazi ukukhubaza noma iyiphi i-drone
Njengomphumela wokusetshenziswa kwalowo mcibisholo ongaphezu kwezigidi ezingama-3,5 zamaRandi asetshenziselwa ukudubula phansi okulula ...
IGladius yidrone yamanzi ekwazi ukurekhoda ngekhwalithi ye-4K
IGladius ngumkhumbi wamanzi okhethekile osemanzini okwazi ukurekhoda ngekhwalithi efinyelela ku-4K futhi uzulazule ngokujula okungafika kumamitha ayi-100.
U-Arcelor Mittal ufuna ama-drones azimele emafektri awo
U-Arcelor Mittal, ngesikhathi somhlangano nezinkampani kulo mkhakha, usanda kumemezela ukuthi ufuna abalingani abazokwakha ama-drones azimele ezimbonini zawo.
I-DARPA SideArm, iphrojekthi yokuthola ama-drones afike kumamitha ambalwa
I-DARPA isanda kwethula emphakathini lokho abakuqambe ngokuthi i-SideArm, ingalo eyingqayizivele ekwaziyo ukubamba ama-drones ezinamaphiko angaguquki maphakathi nendiza.
I-Airspace Interceptor, i-drone ezizimele ekwazi ukubona nokunciphisa amanye ama-drones
I-Airspace Interceptor iyidrone yakamuva eyenziwe abafana e-Airspace, iyunithi ekwazi ukuthola nokunqanda amanye ama-drones maphakathi nendiza.
Badubula phansi i-drone encane enomcibisholo wePatriot
Abalingani Bamasosha ase-United States badubula phansi i-drone engama-200-euro besebenzisa umcibisholo wePatriot onenani cishe lamadola ayizigidi ezingama-3,5.
Le drone imelana nazo zonke izinhlobo zokushaqeka
Kusuka eFederal Polytechnic School of Lausanne basethulela nge-drone eyingqayizivele ekwaziyo ukumelana nanoma yiluphi uhlobo lwengozi noma lwegalelo.
IDroneShow, umcimbi ohlobene nomhlaba wama-drones ozoba seCatalonia
IDroneShow ngumbukiso wokuqala ohlobene nomhlaba wama-drones ozoba seCatalonia, umcimbi esincoma ukuwuhambela.
I-CIA izokwazi ukwenza ukuhlaselwa kwe-drone ngenxa yeTrump Administration
Ngokwezitatimende ezithile, kubonakala sengathi uTrump unikeze i-CIA imvume yokwenza iziteleka ze-drone lapho zibona kufanelekile.
I-Indra iveza uhlelo lokusebenza olukwazi ukuthola nokulawula ama-drones
I-Indra yembula imininingwane mayelana nephrojekthi ye-ARMS, efuna ukuthola nokulawula noma iyiphi i-drone kusuka kusilawuli sayo.
Bahlose ukuqeda indlala emhlabeni ngokususelwa kuma-drones adliwayo
IWindhorse Aerospace yinkampani yesiNgisi ehlose ukuqeda indlala emhlabeni ngokwakha ama-drones adliwayo.
Le yindlela izinkampani ezivivinya ngayo ama-drones abo ukuphepha kwakho
IVirginia Tech yenza uchungechunge lwezivivinyo ezibonisa umonakalo ongadalwa yi-drone uma ihlasela ubuso bomuntu.
Lawa ama-drones asetshenziswa umnyango wezomlilo eNew York
Esikhathini esithile esidlule saba nethuba lokuthola ukuthi uMnyango Wezomlilo waseNew York wawunentshisekelo ekuphenyweni ...
I-Airbus Pop.Up, imoto ezimele ekwazi ukuhamba emoyeni
I-Airbus Pop.Up yinto entsha abafana be-Airbus, ngokubambisana nochwepheshe be-Italdesing, abayethule eGeneva Motor Show.
I-Picolissimo, idrone encane eyenziwe ukuphrinta kwe-3D
I-Picolissimo yidrone encane kunazo zonke emhlabeni, uhlelo olwenzelwe ukubonga ngokusetshenziswa kokuphrinta kwe-3D.
I-UPS isikhombisa ukuthi kungaba njani ukusebenza nama-drones
I-UPS, ngenxa yokusebenzisana kochwepheshe baseWorkhorse, isibonisa ukuvela kwakamuva kohlelo lwayo lwe-drone.
I-Russian Institute of Aviation Materials idala injini ye-drones ngokunyathelisa kwe-3D
Onjiniyela abavela eRussia Institute of Aviation Materials baphatha ukuthuthukisa nokwenza imoto ye-drone ngokusebenzisa ukuphrinta kwe-3D.
IProject SideArm yiphrojekthi eyenziwe yi-Aurora Flight Sciences futhi exhaswa yi-DARPA ukubamba nokuqalisa ama-drones ezinamaphiko angaguquki.
IGoPro Karma ibuyela emakethe ngemuva kokukhunjulwa ngenxa yezinkinga endizeni
IGoPro isanda kumemezela ukubuyela emakethe kweKarma drone yayo ekhangayo ngemuva kokuxazulula izinkinga zamandla eziholele ekuhoxisweni kwayo.
Yilokhu ongakwenza nongakwazi ukukwenza nge-drone yakho, ngokusho kwe-EASA
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngendlela efingqiwe mayelana nokuthi yini ongayenza nalokho ongeke ukwenze nge-drone namuhla ngokwemithetho ye-AESA.
UDronesDirect usitshela ngomsebenzi wakhe wakamuva, isambulela esizimele ngokuphelele se-drone
IDronesDirect yinkampani yamaNgisi eyenza izindaba namuhla ngenxa yephrojekthi ongakhohlwa ngayo isambulela sakho ekhaya ngaphandle kokwesaba isikhathi.
Ngokuzimela, idrone eyenzelwe ukuthatha izithombe wedwa
I-Selfly yi-drone endizayo eyenzelwe iqembu lonjiniyela ngenhloso eyodwa yokuthatha zonke izinhlobo ze-selfies ngokuzimela.
Le phrojekthi izokuvumela ukuthi wakhe i-drone yakho ngezingcezu ze-LEGO
Ngenxa yale phrojekthi elula futhi engabizi kakhulu eshicilelwe ku-Kickstarter, uzokwazi ukuzenzela eyakho i-drone ngezingcezu ze-LEGO.
I-VA001 yephula irekhodi lobubanzi bezindiza zomhlaba
Ngalesi sikhathi, njengokuthuthuka nokucwaninga kwezinye izindawo zobuchwepheshe, izinkampani akufanele ...
Lawa ma-drones amakhadibhodi alahlwayo alungele ukuletha umuthi
I-DARPA isitshela ngeprojekthi entsha lapho ifuna ukudala khona ama-drones amakhadibhodi alahlwayo, ngokwesibonelo, ukuletha imithi.
Amatekisi omoya akwa-Airbus azoqala izivivinyo zasensimini kulo nyaka
I-Airbus iqinisekisa ukuthi uhlelo lwayo lokuthuthukiswa kwamatekisi asemoyeni luyobe selikulungele ukwenza izivivinyo zokuqala ekupheleni kwalo nyaka ka-2017.
Le yindlela umxhakavu womoya okhiqizwa yi-drone ngayo
I-NASA, ngemuva kocwaningo olwenziwe nge-drone ye-DJI, isikhombisa kuvidiyo isiphithiphithi somoya esikwaziyo ukusenza.
I-DV WING iyimodeli ye-drone yamaphiko engaguquki yakamuva eyenziwe yinkampani yeDrone Volt futhi ehloselwe ngokuyinhloko umsebenzi wezolimo onembile.
I-Google ikhansela iphrojekthi yayo yokuthuthukisa i-drone
IGoogle isanda kumemezela ngesitatimende esisemthethweni isinqumo senkampani sokuvala wonke amaphrojekthi ayo ahlobene nama-drones.
Lokhu kuzoba ama-drones ezempi amasha esikhathi esizayo
I-Perdix yigama iButho laseMelika elibhabhadise ngalo amadroni alo amasha ezempi.
UParrot uxosha abasebenzi abangama-290 besigaba sedrone
UParrot usanda kukhipha abezindaba ememezela ukwakhiwa kabusha kwenkampani okuzoholela ekutheni abantu abangu-290 bangasebenzi.
I-Xpeller, idivayisi elwa ne-drone eyenziwe yi-Airbus
IXpeller yigama lapho i-Airbus yethule ukwakhiwa kwayo kwakamuva, ithuluzi elisha le-anti-drone, ku-CES 2017.
I-Uvifi Draco, idrone yomjaho efinyeleleka kubo bonke
IDraco yigama abafana base-Uvifi ababhabhadise ngalo idrone yabo entsha eyenzelwe ukusetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zezinhlanga.
UFlyt 16, idrone ekwazi ukuthwala abantu
I-Flyt 16, umqondo wetekisi ye-drone abafana bakule Flyt Aerospatial abakwazile ukuyisebenzisa, isibonelo sokuqala esithembisa kakhulu.
I-GRIFF 300, i-multirotor ekwazi ukulayisha kufika kuma-225 kilograms
Uma ungumthandi wama-drones noma udinga ngqo iyunithi ekwazi ukuthwala isisindo esanele ukuyisusa ...
Yi Erida, idrone esheshayo emhlabeni izongena emakethe ngoJanuwari
Ngemuva kokwethulwa kwekhamera yesenzo sayo esisha, iXiaomi yethula ngokusemthethweni idrone yayo entsha ebhabhadiswe njengo-Yi Erida.
Ama-drones e-Amazon azoba namandla okuvika imicibisholo
Kancane kancane kusuka e-Amazon sithola imininingwane eminingi ngokwakhiwa kwama-drones ayo okuzimela, asevele enekhono lokugwema imicibisholo.
I-Xiaomi Yi 4K +, ikhamera yesenzo entsha ozoyithanda
Uma ufuna ikhamera yesenzo entsha ye-drone yakho, ngokuqinisekile uzothanda zonke izici namanani we-Xiaomi Yi 4K + entsha.
Vikela idrone yakho emakhazeni kulo Khisimusi ngejezi enhle
Ngokusobala imfashini yakamuva yama-drones ifika eSpain, zivikele emakhazeni asebusika ngokuzihlomisa ngejezi njengenja ngalezi zinsuku.
Izimpaphe zokufakelwa zizosivumela ukuthi sakhe ama-drones akwazi ukundiza njengezinyoni
Ososayensi abavela eFederal Polytechnic School of Lausanne bakwazile ukwenza uhlelo lwamaphiko olukwaziyo ukwenza indiza eyi-drone njengezinyoni.
I-7-Eleven, inkampani ehambise amaphasela we-drone kakhulu kuze kube manje emhlabeni
I-7-Eleven iyinxanxathela yezitolo e-United States namuhla eye yakwazi ukwenza ukulethwa kwamaphasela angaba yikhulu ngamadrononi.
IVodafone ifuna ukubhekela ukulawula kwe-drone air traffic
IVodafone ngomunye wabaqokelwe ukuqokwa njengenhloko yokulawulwa kwezindiza ezindiza kulo lonke elaseYurophu.
Funda kabanzi mayelana nohlelo olusha lwe-Ubudrone-Talent Cluster olwenziwe yi-University of Burgos
IYunivesithi yaseBurgos isanda kukhipha yonke imininingwane ekhona ohlelweni olusha lwe-Ubudrone-Talent Cluster.
I-Airbus ifuna ukuba yisilinganiso emakethe ye-drone
Abakwa-Airbus bebenentshisekelo yokungena emakethe yezentengiselwano yezentengiselwano futhi, ngalo msebenzi, bakhe isigaba esisha ngaphansi kwegama leDroneLab.
I-Amazon Prime Air iqala ukuthatha izinyathelo zayo zokuqala
Okwamanje siqinisekile ukuthi sonke siyazi ukuthi izinkampani zithanda kanjani iGoogle, noma kunjalo namuhla ...
I-ScaraBot X8, i-octocopter eyingqayizivele kakhulu
Ukungena lapho sizokhuluma ngakho konke izici nezici ezikhona ku-ScaraBot X8 entsha, i-octocopter entsha ye-modular.
I-MIT idala uhlelo ukuze ukwazi ukuzakhela idrone yakho
Abaphenyi abavela kwa-MIT bakhiqize isoftware ekulula ukuyisebenzisa ongazenzela ngayo idrone yakho ekhethekile.
ISky Guys yethula i-drone enokuzimela okukhulu kunamahora angama-24
ISky Guys isiqalo saseCanada esivele sethule i-DX-3, idrone enamaphiko amile ekwazi ukundiza isikhathi esingaphezu kwamahora angama-24.
I-DJI Imemezela Ukuthuthuka Okukhulu Ku-SDK Yayo
Ngesikhathi somhlangano wokugcina owawuhlelwe yi-DJI eSan Francisco, inkampani yamemezela ukwakhiwa kwe-SDK entsha esebenza ngamandla amakhulu.
U-DJI no-EENA basayina isivumelwano sokuhlanganisa ama-drones emizamweni yokutakula
I-DJI isanda kufinyelela esivumelwaneni sokusebenzisana ne-EENA sokwakha insizakalo lapho ama-drones angasebenzisana khona kuzo zonke izinhlobo zokutakula.
UDroneGun, i-bazooka ukudubula phansi ama-drones
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngeDroneGun, ngokoqobo i-bazooka ekwazi ukushaya phansi noma yiluphi uhlobo lwe-drone esebenza kunoma yiluphi uhlobo lokuvama.
INovadrone Nomad, idrone entsha ehlukahlukene efika emakethe
INovadrone isanda kwethula ngokusemthethweni iNomad, idrone entsha ehlukahlukene eqondiswe emkhakheni wobungcweti ngezici ezithokozisa kakhulu.
I-HEMAV ithola ama-euro ayizigidi ezi-3 kumjikelezo wayo wokuqala wokutshalwa kwezimali
I-HEMAV, isiqalo saseSpain esikhethekile kuma-drones, ikwazile ukukhulisa imali engaphansi kwezigidi ezintathu zama-euro emzuliswaneni wayo wokuqala wokutshala imali.
Umcimbi 38 E384, idrone ekwazi ukumboza amahektha angama-800 endizeni eyodwa
I-drone yamaphiko ahleliwe ye-E384 yomcimbi isanda kuthola isibuyekezo esivumela ukuthi ibalaze amahektha angama-38 endizeni eyodwa.
I-DJI AGRAS MG-1S, idrone eyenzelwe ukwenza imisebenzi yezolimo
I-DJI isanda kwethula emphakathini idrone yayo entsha eyenzelwe imisebenzi ephathelene nezolimo, imodeli ebizwa nge-DJI AGRAS MG-1S.
AmaTactical Robotic drone-taxis enza ngempumelelo ukuhlolwa kwawo kokuqala kwangempela
Ngemuva kwesikhathi eside sokuthuthuka nokusebenza, ekugcineni inkampani iTactical Robotic ikwazile ukuhlola ngempumelelo ama-drones ayo amatekisi ezivivinyweni zasensimini.
I-AeroVironment Quantix, i-drone eyi-hybrid ozoyithanda nakanjani
I-AeroVironment isanda kumemezela ukwethulwa kwemakethe yeQuantix, idrone ezimele eyenzelwe ukuqoqa imininingwane yemakethe yezobuchwepheshe.
I-UNHCR iqala ukusebenzisa ama-drones ukusiza abantu abafudukile nababaleki
I-UNHCR isanda kumemezela ukuthi, ukusiza abantu abafudukile kanye nababaleki eningizimu yeSudan, bazoqala ukusebenzisa ama-drones ezinamaphiko angaguquki.
I-AgPixel ne-agX Platform zihlangana ukuze zinikele ngezinsizakalo ezingcono zezolimo
I-AgPixel ne-agX Platform, izinkampani ezimbili ezinikele ekwakheni nasekuklameni ama-drones walokho okwaziwa ngokuthi yi-precision Agriculture, zisanda kujoyina.
I-AirSelfie, idrone eyenzelwe ukuthatha izithombe wedwa
I-AirSelfie iyi-drone efanayo ngosayizi weselula eklanyelwe ngokukhethekile ukuthatha ama-selfies.
ISpain ekugcineni izokwazi ukusingatha olunye lwezivivinyo zeDrone Champions League
Lapho nje sekushicilelwe izisekelo zeDrone Champions League entsha, bafuna ukuthi bazokwenza kuphi izivivinyo futhi omunye angagcina eseSpain.
IDisney izokwakha imibukiso yasebusuku isebenzisa ukuqeqeshwa kwama-drones angama-300
I-Disney ne-Intel basebenze ndawonye ukudala umbukiso wasebusuku osuselwa kuma-drones avumelanisiwe futhi akhanyisiwe.
Lezi yizo zonke izici ezikhona ku-DJI Phantom 4 Pro entsha
I-DJI Phantom 4 Pro iyimodeli enkulu yakamuva yethulwe emakethe yinkampani yaseChina, idrone ekhetheke kakhulu efakwe ubuchwepheshe bamuva.
Yazi i-DJI Inspire 2 entsha kangcono
U-DJI wethula ukukhishwa kwabezindaba lapho ekhuluma ngohlobo olusha lwe-DJI Inspire 2, i-drone esezingeni elifanele yokuqoshwa kwamavidiyo.
Umuntu waseMelika uthola ukuthi unkosikazi wakhe akathembekile nge-drone
Umuntu waseMelika, ngemuva kokuqala ukungabaza ukwethembeka komkakhe ngenxa yezinguquko ezithile azibonile ...
I-MMC F6 Plus, i-drone ekwazi ukuma kuma-DJI Matrice 600
IMMC F6 Plus iyidrone entsha eyethulwe yinkampani yaseChina iMicroMultiCopter Aero Technology ekwaziyo ukubhekana noDJ Matrice 600 onamandla onke.
I-Walkera AiBao, idrone efakwe ubuchwepheshe bamuva kokungokoqobo okubonakalayo nokungathandwa kwabathelisi esikubona
Ukungena lapho sizokhuluma khona nge-Walkera AiBao entsha, idrone efakwe ubuchwepheshe obunjengeqiniso langempela kanye neqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona.
IGoogle imisa iphrojekthi yayo ye-drone ezimele ngenxa yezinkinga zezezimali
I-Google isanda kumisa okwesikhashana i-Project Wing yayo ngenxa yezinkinga ezithile zezezimali inkampani enazo namuhla.
UGoPro ukhumbula iKarma ngemuva kokubona izinkinga zamandla endizeni
IGoPro isanda kumemezela isinqumo sokuhoxisa i-Karma drone yayo emakethe okwamanje ngemuva kokubona izinkinga ezimbalwa zamandla endizeni.
I-Dubai International Airport isivele ihlola imitshina yayo yokuqala yokuthwebula
Labo ababhekele Isikhumulo Sezindiza Samazwe Amazwe E-Dubai basanda kumemezela ukuthi namuhla uchungechunge lwemitshina yokuhlola imishini ye-drone luyahlolwa endaweni ebiyiwe
Lokhu kungaba yiziteshi zosizo lwasemhlabeni zama-drones, ngokusho kweqembu labafundi be-UPV
Iqembu labafundi be-UPV lisikhombisa ukuthi bangabukeka kanjani kanye nokusebenza ngokwethiyori kweziteshi zosizo zomhlaba zama-drones.
I-UPM idala isoftware ukuze noma iyiphi i-drone ikwazi ukuthola umlilo
Iqembu lonjiniyela abavela ku-UPM lisanda kwethula isoftware lapho noma iyiphi i-drone ingakwazi ukuthola umlilo.
I-Egatel yethula uhlelo lwayo olusha lokuxhumana lwama-drones
I-Egatel, inkampani yaseSpain ezinze eGalicia, isanda kwethula uhlelo olusha lokuxhumana olulwa nokugenca kuphela i-drones.
I-DCNS ne-Airbus bazosebenzisana ekuthuthukiseni uhlelo olusha lwe-UAV
I-Airbus isanda kusebenzisana neDCNS yaseFrance ukusebenzisana ekwakhiweni nasekwakhiweni kohlobo olusha lwezimoto ezizimele.
UJonathan Anderson udala uhlelo olukwazi ukugqekeza isignali yanoma iyiphi i-drone ngenkathi indiza
UJonathan Anderson, uchwepheshe wezokuphepha eTrend Micro, ukwazile ukwenza uhlelo olukwazi ukugqekeza isignali yokulawula yanoma iyiphi i-drone.
UTech Guaraní wenza idrone yokuqala ephrintiwe eLatin America
I-Tech Guaraní iyinkampani yokuqala kuyo yonke i-Ibero-America ekwaziyo ukukhiqiza ama-drones ngokufunwa kusetshenziswa ubuchwepheshe be-3D bokuphrinta.
E-Avilés bazosebenzisa ama-drones ukuphatha ukungena kwezimpahla ethekwini labo
Kusukela ethekwini lase-Avilés kumenyezelwe nje ukuthi kusukela manje bazosebenzisa ama-drones ukulawula yonke impahla engenayo.
I-Unión Fenosa isivele ibuyekeze ngaphezu kwamakhilomitha we-1.300 wamandla kagesi ngama-drones
I-Unión Fenosa imemezela ukuthi sezivele zibuyekeze ngaphezu kwamakhilomitha we-1.300 wamandla kagesi anama-drones esifundazweni saseGalicia kuphela.
I-Amazon isikhombisa imidwebo yokuqala yeminidron yayo ekwaziyo ukuthola izingane
I-Amazon ikhombisa imidwebo yokuqala yelungelo lobunikazi ku-minidron efakwe i-Alexa ekwazi ukusesha izingane ezilahlekile kunoma iyiphi indawo.
I-DJI yethula iZenmuse Z30, ikhamera yedrone yakho ene-30x zoom optical
Kusuka ku-DJI sithole isitatimende esisemthethweni simemezela ukwethulwa kweZenmuse Z30, ikhamera entsha yama-drones ane-30x optical zoom.
Esigodini sase-Estós, abelusi baqapha imfuyo yabo ngama-drones
Esigodini sase-Estós, esise-Aragonese Pyrenees, kwenziwa iphrojekthi lapho kuzokwakhiwa idrone entsha ekwazi ukuqapha imfuyo.
ISweden ivimbela ukudubula ividiyo ozisebenzisela yona nama-drones
INkantolo Ephakeme Yokuphatha yaseSweden isanda kwethula umthetho ovimbela ukusetshenziswa kwama-drones ukuqopha ividiyo ozisebenzisela yona.
Le software izokuvumela ukuthi undize i-drone yakho amahora ngaphandle kwesidingo sikaphethiloli
I-ALOFT yisoftware entsha eyenziwe yiNaval Research Laboratory engenza idrone yakho indize amahora ngaphandle kwamandla webhethri.
I-Atomic Lab izonikela, usuku lonke, ukwenza izandla zokufakelwa mahhala
I-Atomic Lab isanda kumemezela ukuthi, usuku lonke lokusebenza, bazozinikela ekwenzeni izandla zokufakelwa zamahhala ngokuphelele.
I-US Air Force iguqula ama-F-16 ayo amadala abe ama-drones
Enye yezinhloso ze-United States Air Force kule minyaka embalwa ezayo ingokwangempela ...
I-Airblock, i-modular drone efanelekayo yokufunda izinhlelo
I-Airblock iyindalo yakamuva evela kuMakeblock, uhlobo lwe-modular drone eyenzelwe umsebenzisi ukuthi afunde amasu wokuhlela.
ICongressal Development Commission icindezela i-EASA ukuthi yenze umthethonqubo wama-drones
Imakethe yedrone ingenye yezindawo ezikhonjiswe kakhulu eSpain nasemhlabeni wonke ...
I-NVdrones ne-DroneDeploy basayina isivumelwano esisha sokusebenzisana
Ngenxa yalesi sivumelwano sokubambisana esisha, abasebenzisi beDroneDeploy bazokwazi ukusebenzisa isoftware eyenziwe yiNVdrones.
UValencia, iphayona ekuqapheni izindawo zasemakhaya ezinamadroni
Isifundazwe saseValencia sisanda kuqalisa iphrojekthi entsha abahlose ngayo ukuqapha izindawo zasemakhaya zisebenzisa ama-drones.
Ama-Drones angena kumajethi ezentengiso ukuhlola ubungozi obungaba khona
E-United Kingdom baqale ukwenza uchungechunge lwezivivinyo lapho ama-drones eshayisana nezindiza zezentengiselwano ukuhlola ubungozi obungaba khona.
I-drone ezimele yama-selfies? Zama i-Hover Camera Passport
I-Hover Camera Passport iyi-drone eyenzelwe ngokukhethekile ukuze, ngendlela yokuzimela ngokuphelele, ikwazi ukuthatha zonke izinhlobo zama-selfies.
IGeneral Electric ukusebenzisa ama-drones ukuthola ukuvuza kwegesi
IGeneral Electric isanda kumemezela ukusungulwa kohlelo olusha lapho bezokwakha khona ama-drones athile emisebenzi yokuthola ukuvuza kwegesi.
Lokhu kubukeka kanjani i-Falcon 8+, idrone yokuqala yokuhweba eyenziwe yi-Intel
Ukungena lapho sizokwazi khona i-Falcon 8+ engcono, okuyidrone yokuqala yezentengiselwano eyenzelwe, eyenziwe futhi emakethwa yi-Intel.
I-DJI imemezela ukusebenzisana neDatumate yokunikeza amaSystems Surveillance Systems
Esitatimendeni esisemthethweni esikhishwe yi-DJI neDatumate kwaziswa ukuthi yomibili le mikhiqizo izosebenzisana ukunikela ngohlelo lobuchwepheshe lokuqapha.
I-SenseFly eBee, idrone ekhethekile ekwenzeni imephu nge-photogrammetry
I-SenseFly isanda kumemezela ukwethulwa kwemakethe kwe-eBee entsha, idrone eyenzelwe imephu ye-photogrammetry.
I-NOAA izokhipha imininingwane eziphepho isebenzisa i-drones
I-NOAA isanda kumemezela ukusungulwa kohlelo olukhethekile lapho kuhloswe ngalo ukusebenza ekukhipheni imininingwane eziphephweni ezisebenzisa ama-drones.
Yakha futhi uhlele i-drone yakho ngezingcezu ze-LEGO ngenxa yeFlybrix
Ngenxa yephrojekthi entsha yeFlybrix, ungakha ngamabhulokhi we-LEGO bese uhlela ikhodi yabo yomthombo ngokwakho kaningi ngendlela ofuna ngayo.
Isitshudeni se-UCAM sizakhela isoftware yobuhlakani bokufakelwa yama-drones
UJosé Antonio Rubio López-Atalaya, umfundi we-UCAM, wethule isoftware yokufakelwa ethokozisayo yama-drones njengephrojekthi yokugcina
Ama-Drones azobaluleka ekufakweni kwamanethiwekhi weNokia's 5G
AbakwaNokia bamemezela ukuthi namuhla sekuvele kucwile ekusetshenzisweni kwamanethiwekhi we-5G, umsebenzi lapho uzodinga khona usizo lwama-drones athile.
Khulisa ukuzimela kwe-drone yakho ngenxa yalezi zinguquko zamabhethri e-hydrogen
Iqembu lonjiniyela abavela e-University of Valladolid likwazile ukwenza uchungechunge lwamabhethri e-hydrogen akwazi ukunika i-drones ukuzimela okwengeziwe
I-Strategy Analysis ilinganisela ukuthi ukulethwa kwe-drone kuzokhula ama-248% ngo-2016
Embikweni wayo wakamuva, i-Foreign Consultancy Strategy Analysis, ibikezela ukuthi ukulethwa kwezimpahla namaphasela anama-drones kuzokhula ngo-248% ngo-2016.
AbakwaNokia baqala ukuhlola uhlelo lwayo lwenoveli lokulawulwa kwezimoto ze-drone
AbakwaNokia basanda kumemezela ukuthi bakulungele ukuhlola uhlelo lwabo lokuphathwa kwezimoto zedrone obala.
IXiaomi isivele iyinkampani yesithathu esezingeni lomhlaba labakhiqizi be-drone
Ngemuva konyaka wezinto ezintsha nempumelelo enkulu, uXiaomi ekugcineni ukwazile ukubeka indawo yesithathu ezingeni lomhlaba labakhiqizi be-drone.
IYunivesithi yaseValencia idala idrone yokuqala ephrintiwe eSpain
Ithimba labaphenyi abavela eNyuvesi yaseValencia likwazile ukudala idrone yokuqala ephrintiwe ephelele ye-3D eyenziwe eSpain.
I-UPS iqala ukwenza izivivinyo zokuqala zokudiliva kwayo
I-UPS neCyPhy Works bathola imvume yokuqhubekisela phambili iphrojekthi yabo yokwakha ama-drones athile wokulethwa kwamaphasela.
Abaphenyi abavela e-Imperial College London baphatha ukundiza idrone ingunaphakade
Iqembu labacwaningi abavela e-Imperial College London likwazile ukundiza i-drone unomphela ngaphandle kwesidingo sayo sokuhlomisa ibhethri.
I-Prodrone PD6B-AW-ARM, i-drone enezinzipho ezikwazi ukuhambisa izinto
I-Prodrone PD6B-AW-ARM yigama lapho inkampani yakwaProdrone ibhabhadise ngayo indalo yayo yakamuva, idrone enezingalo ezikwazi ukuthwala izinto ezisindayo
I-DelfAcopter, idrone yamaphiko ama-rotor angamaphiko angaguquki akhiwe yiDelf Technical University
IDelfAcopter iyi-drone ephiko enamaphiko amaningi ekwazi ukusuka nokuhlala ngokushelela mpo eyenziwe yiTechnical University yaseDelf.
Ukwazi i-Aerix VIDIUS kancane kangcono
Okufakiwe esizokunikezela ukwazi kangcono kangcono zonke izici nokuthi yini i-minidron efana ne-Aerix VIDIUS engakunikeza.
U-DJI Mavic Pro, wazi kangcono isidalwa sakamuva samazwe angamaShayina
Ukungena lapho sizokhuluma khona nge-DJI Mavic Pro entsha, okuyindalo yakamuva yokufinyelela emakethe ye-DJI yezizwe ngezizwe yaseChina.
I-ESPN neSky Sports bamemezela intshisekelo yokusakaza imijaho ye-drone
Amanethiwekhi wethelevishini i-ESPN ne-Sky Sports basanda kumemezela intshisekelo yabo ekhulayo ekusakazeni bukhoma kwemijaho ye-drone.
ICheerson CX10, idrone encane enekhamera ozoyithanda
Uma ufuna idrone engabizi futhi encane kakhulu, ngokuqinisekile uzothanda lokho okunikezwa yiCheerson CX10, imodeli efakwe nekhamera.
I-DARPA izobe isebenza kunethiwekhi ekwazi ukuqapha imisebenzi yedrone yasemadolobheni
I-DARPA isanda kumemezela ukuthi banezinhlelo zokwakha uhlobo lwenethiwekhi yasemadolobheni yama-drones akwazi ukurekhoda wonke umsebenzi abawenzayo.
Amanethiwekhi we-4G azokhuphula ibanga lokundiza lama-drones
Okwamanje elinye lamaphuzu abuthakathaka emhlabeni wama-drones, ngaphezu kokuzimela kwawo, lokho ...
Le drone iyakwazi ukundiza ngamakhilomitha angama-241 ngehora
IStratasys ne-Aurora Flight Sciences bajoyina ukwenza idrone engikulethela yona namuhla, imodeli ekwazi ukufinyelela ku-241 km / h ngejubane eliphezulu.
UMurcia uzosebenzisa ama-drones ukuqapha amanzi eMar Menor
UMurcia usanda kumemezela ukuthi bazohlomisa amaqembu abhekele ukuqapha imicimbi engenzeka eMar Menor ngama-drones.
I-Prodrone yethula i-drone yayo entsha efanelekile yokuhlola uphahla lwangaphakathi kanye nendawo eqondile
I-Prodrone yethula uhlobo lwayo olusha olwenzelwe futhi lwenzelwe kuphela ukuhlolwa kwezindawo eziqondile kanye nophahla.
IGoPro yethula ngokusemthethweni iKarma entsha
Ngemuva kwezinyanga eziningi belindile, ukuvuza noma nokubambezeleka, ekugcineni kusuka kwaGoPro sebethule ngokusemthethweni iKarma entsha.
IPowerEye inekhamera eshisayo nesinqumo esingu-4K
IPowerVision yethula okokuqala ngqa zonke izici ezikhona kwiPowerEye entsha, idrone efakwe ikhamera eshisayo nesisombululo se-4K.
U-DJI no-Epson basebenzisana ukuthuthukisa izibuko zangempela zeMoverio
U-DJI no-Epson basanda kumemezela isivumelwano sabo esisha sokusebenzisana ukuqhubekisela phambili izibuko ezingokoqobo ze-Moverio.
IMercedes neMatternet bayahlangana bakhe iveni ezokwethula ama-drones okulethwa
IMercedes isanda kwenza ngokusemthethweni isivumelwano sayo sokusebenzisana nenkampani iMatternet ukwakha ngokuhlanganyela iveni ekwazi ukwethula ama-drones okulethwa
I-Yuneec Breeze, imodeli ehlanganiswe kahle enekhamera yesinqumo esingu-4K
Kusuka eChina namuhla bayasimangaza ngokwethulwa kweYuneec Breeze entsha, idrone encane kakhulu futhi ehambisanayo izimfanelo zayo ezizokumangaza nakanjani.
I-SEUR ijoyina intshisekelo yokusebenzisa ama-drones ukulethwa kwezimpahla
I-GeoPost Group, i-SEUR eyayo, isanda kumemezela intshisekelo yayo yakamuva emhlabeni wokulethwa kwama-drones nezimpawu zawo.
INew York izoba neyayo i-drone patrol patrol
UMnyango Wezomlilo waseNew York usanda kumemezela ukwamukelwa kwethimba elisha lama-drones ezinhlwini zalo.
Ama-drones e-courier akwaGoogle athatha ukulethwa kokudla kukaChipotle
I-Google isanda kusayina isivumelwano sokusebenzisana ne-Mexican food chain esheshayo iChipotle ukuze ithathe ukulethwa kwama-burritos ngama-drones.
UParrot wethula ikhithi yakhe entsha yokuthuthukisa ama-smart drones
UParrot usazisa ngayo yonke imininingwane yethuluzi lakhe elisha lokuthuthukiswa lokwakhiwa kwazo zonke izinhlobo zama-drones ahlakaniphile.
UMavic, okuthiwa yi-drone esongekayo ye-DJI
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngoMavic, okucatshangwa ukuthi yi-drone yokugoqa okuzosebenza kuyo namhlanje i-DJI edumile yase-China.
USaildrone ukwazile ukuxhasa iphrojekthi yakhe ngamaRandi ayizigidi eziyi-14
USaildrone, isiqalo saseMelika usanda kumemezela ukuthi, ngemuva komjikelezo omkhulu wezezimali, usanda kukhulisa ama- $ 14 million.
I-SenseFly eBee SQ, idrone ekhethekile kwezolimo
I-SenseFly iyasimangaza futhi ngokwethulwa kwalokho okubizwa nge-eBee SQ, idrone eyenzelwe umhlaba wezolimo ngokukhethekile.
Ukusebenza kwe-DJI drones debut Coach Mode
I-DJI isanda kumemezela ukuthi yini ukusebenza okusha kwe-Coach Mode okutholakalayo kumamodeli ayo wakamuva ukungena emakethe.